Hogaamiyaasha Carabta Oo Digniin U Diray Iiraan – Heemaal News Network
Hogaamiyaasha Carabta Oo Digniin U Diray Iiraan
Kulan ay ku yeesheen dalka Sacuudiga ayaa waxa ay hogaamiyayaashani hoosta ka xariiqeen in ay doonayaan in ay taageeraan Falastiini ayna xaqiijiyaan ammaanka gobolka.
Boqorka sacuudiga boqor Salaman ayaa dhaleeceeyay wax u ku tilmamay faragelinta qaawan ee Iiraan ay arimaha gobolka ku haayso .
Boqor Salmaan ayaa muujiyay sida uu ugu soo horjeedo waxa uu ku tilmaamay falka arggaxisada ah ee Iiraan.
Hogaamiyayaasha wadamada Jaamacadda Carabta ee kulanka uu ugu soo gabagabeeyay dalka Sacuudiga kama aysan hadlin duqeeyntii dhanka cirka ee Maraykanka, Britain iyo Faransiisku ay ka geeysteen dalka Suuriya .
Hogaamiyayaasha Carabta ayaa dhanka kale waxa ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan go’aankii madaxwayne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimada Israa’iil.
Boqor Sacuudiga boqor Salmaan waxa uu sheegay in bariga Quddus ay tahay qeeyb muhiim ah oo ka mid ah dhulka falastiin
Raisal Wasaaraha Dalka Lubnaan Oo Go’aansaday In Uu Booqdo Dalka Sacuudiga Iscasilaadii Kadib
February 28, 2018 Caalamka
Sacuudi Carabiya ayaa marti qaad rasmi ah u fidisay Ra’iisul Wasaaraha Lubnaan Saad Hariri, taasi oo noqon doonto booqashadiisa ugu horreysa tan iyo markii uu isku casilay Riyadh bishii November. Safiirka Sacuudiga Nizar al-Aloula, oo […]
Mraykanka Oo ka Soo Hor Jeestay La Dagaalanka Musuqmaasuqa Dalka Sacuudiga Amiir Mahamedna Eedeeyey
Saraakiisha Mareykanka ayaa walaac ka muujiyeen “tallabadii maamulka sacuudiga oo dhowaan xabsiga u taxaabay qaar ka mid ah xubnaha boqortooyada, wasiirrada iyo ganacsatada iyaga oo sheegay in go’aanadaasi ay “waxyeeleyn karaan danaha Mareykanka”, sida lagu […]